Amathiphu wokuthatha iDolobha Photography - LucidPix
Amathiphu wokuthatha iDolobha Photography
Idolobha lingaba yindawo enhle yokuthatha izithombe, kepha kwesinye isikhathi kungaba nzima ukuthwebula ubuhle bangempela bokubukeka bomuzi. Nawa amanye amathiphu wokuthi ungazithatha kanjani izithombe ezinhle kakhulu zedolobha nayo yonke imininingwane ofuna ukuyibamba.
Ithiphu # 1: Sebenzisa Imikhawulo Kokuzuzisa Kwakho
Imigwaqo yedolobha ingasetshenziswa njengemigqa ehamba phambili ezithombeni zakho. Imigqa eholayo iyithuluzi lokuthatha izithombe elihlanganisiwe elisetshenziswa njengesiqondisi sombukeli ukuqondisa ukunaka kwabo iphuzu elithile. Ngokusebenzisa imigwaqo noma umgwaqo wedolobha, kungasiza ukunika isihloko noma isizinda sesithombe sakho umphumela opholile.
Ithiphu # 2: Thola Ukubuka Ngeso Ngezinyoni
Ukuthatha isithombe sedolobha ngokubuka endaweni ephezulu kungasiza ukunika umbukeli umbono ongcono wokuthi idolobha lilonke libukeka kanjani. Njengoba abantu abaningi bejwayele ukubuka leli dolobha ukusuka ezitaladini, ukulibona lisendaweni ephakeme kungenza isithombe sihlanganyele kakhulu. Izithombe zenyoni ezibuka Isitaladi iLombard eSan Francisco ngempela sikhombisa isibukeli ukuthi unjani umgwaqo indlela.
Ithiphu # 3: Thola Phansi
Ukungena edolweni uthathe isithombe sesakhiwo eside kusuka phansi kuya phezulu kungaba isithombe esijabulisayo ngoba sigcizelela ukuphakama. Lokhu kunganikeza ababukeli bakho ukuthi babuke kangcono ukuthi ezinye zezakhiwo zikude kangakanani edolobheni ozithwebulayo.
Ithiphu # 4: Thola Umzimba Wamanzi
Amadolobha amaningi aseduze kwemizimba yamanzi, futhi le mizimba yamanzi ingangeza imiphumela ethokozisayo ezithombeni zakho. Ukuthatha isithombe sedolobha ngemuva komzimba wamanzi nakho kunganciphisa noma yiziphi izifundo eziphazamisayo ongaba nazo ngaphambili. Ungathatha futhi isithombe somuzi ngaphesheya komzimba wamanzi ebusuku, wakhe isithombe esikhanyayo. Kwamadolobha osogwini, ukubona ukuhamba kwesikebhe zivame ukubiza izindleko zokwamukelwa, ngoba zinikeza umbono wedolobha ongafiki ukulibona / Ungafunda ngokungeziwe amathiphu wokuthwebula izithombe ezikhanyayo kwelinye ibhulogi yethu.
Amadolobha ayindawo enhle yokuthatha izithombe ezimangazayo ngenxa yokuthi muhle, ubuhle bendawo enhle, namandla amakhulu. Ngokuzayo lapho ungena edolobheni, thatha ezinye izithombe uziguqule uzenze izithombe ze-3D thumela eqenjini lethu le-Facebook wonke umuntu azobona!
Imibono Yezithombe Zezimbali Zasehlobo ze-3D →← Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela eFrance!